B2B Strategies Strategies maka 2013 na karịrị | Martech Zone
Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 11, 2013 Satọde, Ọgọstụ 10, 2013 Douglas Karr
Mgbe anyị na-agwa ụlọ ọrụ na-ejere ndị ahịa ozi, ha na-ajụ mgbe niile ma ọ bụrụ na anyị na ụlọ ọrụ B2C ọ bụla arụ ọrụ. Mgbe anyị na ụlọ ọrụ B2B na-ekwurịta okwu, ha na-ajụ ma anyị esorola ụlọ ọrụ B2B rụọ ọrụ. N'ihe niile n'eziokwu, atụmatụ dị nnọọ yiri… ọ bụ ha ọnụọgụ na usoro ịzụrụ ihe dị iche. Agbanyeghị, anyị na-ahụ ọdịiche dị na uru kwa izu. Companieslọ ọrụ B2C na-adaberekarị na nnukwu mpịakọta na obere ego maka nzụta - nnukwu mkpa dị mkpa. Maka B2B, ntinye aka dị oke ọnụ karịa ọnụ ala, ọnụọgụ nwere ezigbo mkpa bụ isi.
M na-ama jijiji na ọtụtụ ndị na-ere ahịa B2B na-eche ma ahịa n'ịntanetị ọ ga-enyere ha aka n'ezie. Echetara m isonyere na ntanetị n'ịntanetị afọ 20 gara aga, ana m eji tontanetị achọta ihe mmetụta sensọ maka usoro mmepụta nke nwere nghọta ka mma na oghere dị ukwuu karịa usoro njem anyị na-eji na Akwụkwọ akụkọ. O were izu ole na ole, mana achọtara m ihe m na-achọ ma anyị zọpụtara ọtụtụ iri puku dollar kwa afọ mgbe anyị na-enweghị dochie ihe mmetụta sensọ. Nke ahụ bụ B2B. Na ntaneti.
Ugbu a, ọ na-ewe nchọta Google dị mfe ma enwere m ike ịchọta ihe karịrị ndị na-emepụta ihe mmetụta 1,500, nkọwa ha, nyocha nke ụlọ ọrụ ndị na-ere ha, na vidiyo nke otu esi eji ha na ebe ịzụta ha. Nke ahụ bụ ọdịnaya B2B. Ọ dị ebe niile. Ndị ọchụnta ego na-etinyekarị dollar dị oke mkpa mgbe ha na-eme mkpebi ịzụta na ndị isi azụmaahịa na ndị isi azụmaahịa anaghị anọdụ ala chere ka onye na-ere ahịa kpọọ ha tupu ha amalite ime mkpebi. Ọtụtụ mgbe, a na-eme mkpebi site na oge atụmanya na-akpọ gị!
GetAmbassador, usoro ntinye aka nke akara aka maka azumahia, meputara ihe omuma a na B2B ahia ahia site na data ha nwetara BtoBOnline na TopRankBlog.
Tags: b2bb2b ọdịnayab2b ahia ahiaahịa b2b